Oppa မဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ Jungkook Oppa - Chelmo News Portal
Home›Exclusive›Oppa မဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ Jungkook Oppa
ဒီတစ်ခါမှာတော့ နိုင်ငံကျော် K Pop အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS ရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးလေးတစ်ဉီးဖြစ်သလို Team Vocalist တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jungkook အ ကြောင်းကိုမင်မင်က တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mnet’s New Yang Nam Show မှာ အစ်ကိုဖြစ်သူတွေရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရ Jungkook လေးက ငယ်စဉ်ကတည်း အရမ်းရှက်တတ်ပြီး သူ့ကို သီချင်းဆိုပြခိုင်းရင် မဆိုနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။အကြောင်းကတော့ ဆိုပြရမှာရှက်ပြီး ငိုချင်သလိုလိုဖြစ်လာလို့ပါတဲ့။
BTS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဉီးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က Jungkook ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားစတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်တဲ့ လူတစ်ဖက်သားရဲ့ ခံစားချက်ကို ပိုပြီးနားလည်လာပြီး ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တာပဲ မလုပ်ဖို့ဆိုတာကို ပါ တဖြည်းဖြည်းနားလည်ရင့်ကျင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
၀၃. Oppa လို့ခေါ်ခွင့်ပြုလာတယ်
အရင်ကဆို သူ့ရဲ့ Army လေးတွေက Jungkook Oppa လို့ခေါ်ရင် “ ငါက မင်းတို့ အစ်ကိုအရွယ်ဟုတ်ဘူး အသက်ကြီးမှသာလျှင် အိုပါးလို့ခေါ်ရတာ ID card တွေက ယူလာခဲ့ပြီး အသက်စစ်ဆေးပြီးရင် Oppa လို့ခေါ်ခွင့်ပြုမယ်လို့”ပြောခဲ့ပါတယ် ( တကယ်တော့ ကလေးက ငယ်ချင်နေတာ 😀 ) အခုေတာ့ Oppa လို့ခေါ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။
၀၄. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်
TVN’s ရဲ့ you quiz on the black အစီစဉ်ရဲ့ episode တစ်ခုမှာ Jungkook ရဲ့ BTS Vocalist တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Vocalist တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်လားလို့ ငါ့ကိုယ်ငါပြန်မေးတယ် အဲ့ဒီနောက် ငါစဉ်းစားမိတာက ငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မယ် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲ အဲ့ကတည်းက ပုံမှန် တစ်နာရီလောက်ပဲ လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ နှုန်းကနေမိနစ်တိုင်း မိနစ်တိုင်းမှာ ရေချိုးခန်းထဲမှာရော ကားပေါ်မှာရော အချိန်ရတိုင်း ပိုပြီး အသံပိုင်းကို လေ့ကျင့်ဖြစ်လာတယ် Vocalist ဖြစ်လာပြီးနောက်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ ပိုရှိလာတယ် ဆိုတာ ကို မြင်သာစေတယ် လို့ အစ်ကိုဖြစ်သူတွေကလည်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
Jungkook Oppa ရဲ့ ေပြာင်းလဲလာတဲ့ စိတ်ထားလေးနဲ့ခံယူချက်ကတော့ တကယ့်ကိုချစ်စရာလေးပါ။